युवती कुट्नेलाई छाड्न दवाव दिने मेयर चौधरीस‌ंगकाे कुराकानी .. – Everest Dainik
युवती कुट्नेलाई छाड्न दवाव दिने मेयर चौधरीस‌ंगकाे कुराकानी ..
भन्छन् - 'मलाई आफ्नो दायित्व थाहा छ, कसैले सिकाउनुपर्दैन । '
२०७४, २६ फाल्गुन शनिबार
काठमाडौँ, २६ फागुन । किशोरीलाई कुटपिट गर्ने रामबहादुरलाई बिहीबार नै इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडले पक्राउ गरेको थियो ।
तर, घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी, वडाध्यक्ष प्रेम रोकायालगायतको रोहवरमा तत्कालै छोडिएको प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश विष्टले बताए ।
शुक्रबार किशोरीका बुबाले किटानी जाहेरी दिएपछि पुनः पक्राउ गरिएको छ । ‘रामबहादुरलाई पक्राउ गरिएको छ, बोक्सी भन्दै कुटपिट घटनाको अनुसन्धान थालिएको छ,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भने ।
रमिते मेयर भन्छन्–
भिडभाड देखेर प्रहरी चौकी गएको थिएँ, तर म बोलिनँ, आफ्ना काम अरू पनि छन् ।
प्रश्न: मेयरज्यू, तपाईंको नगरपालिकास्थित देउकलिया गाउँमा बिहीबार बोक्सीको आरोपमा एउटी किशोरीलाई समाजकै अगाडि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ, यो विषयमा तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ?
जवाफ: किन नहुनु ? जानकारी छ । पीडितलाई अहिले धनगढी लगिएको छ, अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउन जाहेरी परेको छ ।
प्रश्न: जाहेरी कसले दिएको हो ?
जवाफ: पीडित पक्षले ।
प्रश्न: जाहेरी त आज मात्र परेको छ, घटना हिजोको हो, तपाईंलाई कहिले थाहा भयो यो घटना ?
जवाफ: हिजो नै भयो ।
प्रश्न: कुटपिटबाट घाइतेलाई हिजो नै एम्बुलेन्समै राखेर प्रहरी चौकीमा लगिएको थियो, तपाईं पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो भन्ने जानकारी आएको छ नि ?
जवाफ: हो, म एकैछिन पुगेको थिएँ ।
प्रश्न: कुटिएकी किशोरीलाई पनि चौकीमा राखिएको थियो, घटना कसरी भएको हो, उनीसँग केही जानकारी लिनुभयो ?
जवाफ: अहँ, किन लिनु र ?
प्रश्न: होइन, पीडित किशोरीसँग सोधपुछ पनि गर्नुभएन ?
जवाफ: मैले पीडितसँग पनि गरिनँ, पीडकसँग पनि गरिनँ ।
प्रश्न: त्यसो भए किन जानुभएको त चौकीमा ?
जवाफ: बाटोमा जाँदै थिएँ, भिडभाड देखेँ, के रहेछ भनेर हेरेको । मान्छेहरू आपसमा बाझाबाझ गरिरहेका थिए । त्यस्तोमा के बोल्ने भनेर आफ्नो बाटो लागेँ ।
प्रश्न: ए, त्यसो भए ‘रमिता’ हेरेर फर्कनुभयो ?
जवाफ: हो, अरू पनि काम हुन्छन् नि मान्छेका ।
प्रश्न: साँच्चै, तपाईं मेयर हुनुअघि त्यहाँको उमाविमा पढाउनुहुन्थ्यो रे, हो ?
जवाफ: हो, राष्ट्रिय उमाविमा अंग्रेजी पढाउँथेँ ।
प्रश्न: ए, तपाईं आफैँले अंग्रेजी कहाँ पढ्नुभएको हो नि ?
जवाफ: काठमाडौं, कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसतिर । ०६८ तिर मास्टर्स पास गरेको हुँ ।
प्रश्न: त्यसो भए त तपाईं युवा नै हुनुहुन्छ ?
जवाफ: हो, भर्खर ४० वर्षको भएँ ।
प्रश्न: युनिभर्सिटी क्याम्पसबाट अंग्रेजीमा मास्टर्स पढेको एउटा युवा जनप्रतिनिधि भएको छ, तर आफ्नै गाउँमा एउटी किशोरी बोक्सीको आरोपमा सार्वजनिक रूपमा कुटिँदा बोल्न सक्नुहुन्न भने तपाईंको
शिक्षालाई, तपाईंको उमेरलाई र जनताबाट तपाईंले पाएको विश्वासलाई के भन्ने होला ? -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
जवाफ: त्यसमा कारबाही गर्ने काम प्रहरीको हो, मेयरको होइन ।
प्रश्न: ती किशोरी तपाईं आफैँ शिक्षक भएको राष्ट्रिय उमाविमा कक्षा ११ कि विद्यार्थी पनि हुन् नि, जानकारी छ तपाईंलाई ?
जवाफ: जानकारी भएन ।
प्रश्न: आफ्ना नगरपालिकाभित्रकी बासिन्दामाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएको छ, सार्वजनिक रूपमा दुव्र्यवहार भएको छ, तर ती को रहिछन्, के गर्छिन् भन्ने विषयमा तपाईंलाई चासो भएन ?
जवाफ: मैले तपाईंलाई भनिसकेँ, त्यो काम प्रहरीको हो ।
प्रश्न: जनतामाथि अन्याय भएको छ भने आवाज उठाउने भूमिका पनि छैन तपाईंको ?
त्यो तपाईंले सिकाउनुपर्दैन । मलाई आफ्नो दायित्व थाहा छ ।
प्रश्न: गोठमा गोबर सोहोरिरहेकी बालिकालाई लछारपछार गर्दै लगेर सात घन्टासम्म कुटपिट भएको छ, ती बालिका कसकी छोरी हुन्, तर आफ्नो गाउँ–टोलकी ती बालिकाको विषयमा तपाईंलाई ३०
घन्टासम्म पनि जानकारी किन छैन ?
जवाफ: मैले तपाईंलाई भनिसकेँ, मान्छेका अनेक काम हुन्छन् । आफ्नो गाउँमा मैले के गर्ने भनेर काठमाडौंमा बसेको पत्रकारले फोन गरेर सिकाउनुपर्दैन, तपाईं आफ्नो काम गर्नोस् ।
प्रश्न: देश संघीयतामा गएको छ, जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका छन्, तपाईंजस्ता युवा निर्वाचित पनि भएका छन् । तर, आफ्नै छिमेककी चेलीमाथि यत्रो ज्यादती हुँदा पनि तपाईं थाहा नपाएजस्तो
गर्नुहुन्छ भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनु, प्रश्न गर्नु ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका सचेत नागरिकको कर्तव्य हो नि, होइन र ?
जवाफ: तपाईं आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नोस्, तर मलाई नसिकाउनुस् ।
तर, अन्तिममा तपाईंलाई एउटा कुरा भनौँ है, मेयरज्यू
प्रश्न: नामचाहिँ ममताप्रसाद कसले राख्यो होला ? तपाईं त निष्ठुरप्रसाद हुनुहुँदो रहेछ ?
जवाफ:त्यो तपाईंको मूल्यांकन हो । मलाई त्यसमा चासो छैन ।
तर, आजसम्म जे भयो भयो, पीडितहरू अस्पतालमा छन्, मिल्यो भने भोलि गएर भेटिदिनुहोला, उनका गुनासा सुनिदिनुहोला । कारबाही के भयो भनेर हामी भोलि पनि फोन गर्छौँ । ठीकै छ, बिहानै नगर्नुहोला, बेलुका गर्नुहोला ।
भीमदत्त नगरपालिकामा डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण तालिम
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई अभिनन्दन
कोरियामा किन घट्यो विवाह दर?
भारतबाट फरार हीरा व्यापारी लण्डनमा पक्राउ
मन्त्री अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना लगत्तै उद्धारमा खट्ने प्रहरी पुरस्कृत
आवश्यकता परे जनमत बुझ्न ‘जनमत संग्रह’मा जान सकिने- डा. शशांक कोइराला
६१ जिल्लाको प्राथमिक तह नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)
स्काभेटर दुर्घट्नामा चालकको मृत्यु